Kupeta Recliner Mawiricheya - Kumusoro Kudzoserwa | Karman® Nyaradzo
musha / Kudzokorora Mawiricheya
Chero Chigaro Saizi16 "Chigaro18 "Chigaro20 "Chigaro
Chero Chigadzirwa Kurema19.1 makirogiramu - 25 lbs25.1 makirogiramu - 35 lbs35.1 lbs kana zvimwe50 lbs kana zvimwe
Chero Rudzi rweLegrestKufamba KureInobviswa
Chero Armrest Rudziwakasimba
Kuisa mari mukutsenhama maWheelchair uye maBhenefiti
Yakanakisisa Yakatsenhama Wiricheya
Kudzikama Wiricheya zvakagadzirirwa kutendera munhu kuti agare zvakanaka pamakona ekuwedzera akachengeteka uye akasununguka. Inowanzo shandiswa pekugara kweakakomba hudyu ekuwedzera makondirakiti, orthostatic hypotension, uye kumanikidza kugovera zvakare kwekudzivirira kuparara kweganda.
Recliner Wiricheya anoshanda zvirinani ne Kukwidziridza Legrests (ELRs); makumbo uye tsoka dzemushandisi zvinogona zvakare kumiswazve kuitira kunyaradzwa uye kubatsirwa kwehutano. Iyo "ELRs" inosarudzika pane mamwe mamodheru uye zvakajairika pane vamwe. Ive neshuwa yekubvunza nezve ndeipi mhando yeELR inonyanya kukodzera pekugara kwako uye chinzvimbo chinodiwa.
Pane mamwe mawiricheya iyi sarudzo saka iva nechokwadi chekutarisa iyo sarudzo uye zvishongedzo kana uchitenga. Tilt mu Space mawiricheya inowanzo fungidzirwa kune avo vanotsvaga chakanakisa chigadzirwa muchigaro chemawiricheya kana kutsvedza muwiricheya yemuchadenga.
Iyo MVP-502 Recliner ndiyo "yepamusoro yetambo" inodzosera wiricheya inowanikwa pamusika nhasi. Nekugara kwakasunga tambo uye nekumisikidza kumashure, inopawo patent ergonomic "V-Shape" zvigaro sisitimu inopa hukuru hwekunyaradza uye inoshandiswa zvakare se "chigaro chekurasa", ichidzivirira mushandisi kutsvedza kubva pachigaro achiri munzvimbo yakazara yekuzorora .
Kupfuurirazve, iyo MVP-502 ine poindi yekutsanangudza yeiyo armrests uye ndiyo yega yakatsenhama wiricheya pamusika nhasi uko mawrestrests anowedzera achienda kuseri kwewiricheya sezvo mushandisi akatsenhama. Izvi zvinokurudzira kumira kwakanaka uye zvinopa zvakasikwa armrest positioning kana mushandisi akatsvaga yakanaka yekutsamira kona.
Iwo chete epamusoro mamodheru mamodheru anopa risingagumi kudzoka-kumisazve. Huremu hushoma mune yakateedzana i33 lbs, mamwe marina ekugadzirisa ari pamusoro pe53 lbs. uye kazhinji inoratidzira yakashata furemu dhizaini inodzikamisa kufamba uye kwese kunyaradzwa.
Kushandisa T-6 Ndege Giredhi Aluminium kunobatsira kudzikisa huremu pasina kupa simba reiyo furemu. Ese edu erechairchairchair anopa ratidziro yekupedzisira, kutenderera kweropa kuri nani, rubatsiro mukurara, uye kutakurika.
Kutsvaga wiricheya inokwana iwe zvakakwana zvakakosha. Ndokusaka isu takaparura nyowani ERGO FIT ™ Campaign, yakavakirwa pazvakakodzera Wiricheya Ergonomics. Nzira chaiyo yekushandisa ERGO FIT ndeyekutarisa kwako kwezuva nezuva wheelchair use, Mawiricheya Zviyero, uye zvakare uchifunga nezve nharaunda yauchange uchishandisa wheelchair yako.
Kunyangwe ari mafambiro ekunze kana ekushandisa mukati, isu tinoona kuti kana iwe uchikwira wiricheya ramp, ichave iine mashoma mashoma ekushora; vedu ERGO FIT ™ nzira inopa huwandu hwakawanda hwe sarudzo uye zvishongedzo, uye mamodheru ane chaiwo maficha akagadzirirwa kuwedzera kufamba kwako uye nyaradzo.
MACHITO - Chigadzirwa chega chega Chekumisikidza Peji chine ruzivo rwese rwakanangana nechigadzirwa (semuenzaniso HCPCS Makodhi, Zvidimbu, Zvinyorwa, UPC, nezvimwewo). Kana iwe uchida kuona chese chigadzirwa chakanyorwa nema specs uye ruzivo, ndapota shanyira yedu Zviwanikwa Landing peji nekudzvanya HERE.
Kutenga Kutsamira vs. Tilt mu Space Wiricheya
Mapato ese ari maviri akagadzirirwa kupa nyaradzo yakasimba uye kutarisirwa mupfungwa nekumanikidzwa kuregererwa. Kune akawanda mabhenefiti ezero giravhiti kana kudzikiswa kwemaronda kuburikidza nekugara uchimanikidzwa nekugara kwenguva yakareba yenguva. Muchikamu chino, zvingave zvakakosha kuti unyure zvakadzama pamwe neunyanzvi hwako hwekurapa kusiyanisa kana zvigaro zvekugara kana zvimwe zvigadzirwa zvinobatsira zvingave zvichidikanwa. Isu tinopa kubvunza uye tinopa zano kuti iwe utidane isu kumibvunzo. KuKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru emawichecha emawoko ekusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa pawiricheya, iwe uchazoda iyo yakareruka kupfuura yakasununguka wiricheya iripo. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nehuremu hwechigadzirwa uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako: